Nebulizer (inhaler): उपकरण र यसको भिन्न को विवरण
धेरै क्लिनिक प्रबन्ध inhalation कुनै पनि श्वसन रोग को उपचार मा कि पहिले सम्झन हुनेछ। सधैं चिकित्सा को smelled जो यी कार्यालय, ठूलो डरलाग्दो मिसिन ... र त्यसपछि चिसो मौसम लागि सडक घर - र सारा प्रक्रिया केही छ। वैकल्पिक - को पीसा जडिबुटी वा सोडा संग teapot भन्दा घरमा सास फेर्न गर्न। अब सबै परिवर्तन भएको छ। त्यहाँ व्यक्तिगत प्रयोगको लागि खरिद गर्न सकिन्छ भनेर विशेष उपकरणहरू छन्। nebulizer inhaler - हाम्रो कुराकानी विषयको यस्तो उपकरणहरू को प्रतिनिधिको रूपमा सेवा गर्नेछन्। यो एक हो भनेर र नै, र पहिलो अवधि दोस्रो एक विभिन्नता छ कसैले सोच्छ। हामी यी subtleties तल्लीन छैन। हामी यसको प्रयोग फलस्वरूप प्राप्त छ जो परिणाम, रुचि राख्नुहुन्छ।
त्यो inhaled छ र यो आवश्यक छ जब?
यो प्रक्रिया विभिन्न श्वसन रोगहरु को रोकथाम र उपचारका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका को छ। त्यहाँ लागूऔषधको बानी उपयोग गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो कार्यान्वयनको धेरै लाभ छन्। पहिले, हामी दबाइ को यस्तो ठूलो खुराक आवश्यक छ। दोस्रो, सबै भन्दा अवस्थामा रिकभरी किनभने रोग को स्थानीयकरण को स्थान मा प्रत्यक्ष प्रभाव को धेरै छिटो हुन्छ। तेस्रो, हरेक व्यक्ति, उमेर बिना पनि उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिम तर कम से कम एक nebulizer प्रयोग व्यावहारिक साइड इफेक्ट को कुनै जोखिम छ।
को inhaler को डिजाइन र समारोह
बिक्री मा सबै मोडेल यस्तै संरचना छ। पहिले, यो मुख्य एकाइ हो। यो छ जहाँ उत्पन्न हावा प्रवाह, इच्छित चिकित्सकीय aerosol तितरबितर सिर्जना। दोश्रो, यो ठाउँमा प्रक्रिया को लागि हालिएको थियो जो समाधान ग्लास सानो मात्रा (5-10 एमएल), जस्तो कि विशेष क्यामेरा छ। पोत मा स्थित छ स्पंज दुई Hoses छ। पहिले एक उपकरण सोझै जान्छ, र दोस्रो - उत्पादन। कम वा मध्यम aerosol तितरबितर संग खुवाउनुभयो छ पछिल्लो संलग्न mouthpiece, मास्क वा ट्यूब। यो भद्दा समाधान खराब लागू किनभने nebuliser (inhaler) भर्खरै गलत जान सक्नुहुन्छ सम्झना हुनुपर्छ।
inhalation आशा के गर्ने?
चिकित्सा समयमा, महत्वपूर्ण कार्यहरू एक नम्बर:
को ब्रोन्कियल ट्यूब को spasm हटाउन;
श्वसन अङ्गहरूको पुनर्वास;
को भडकाऊ प्रक्रिया उन्मूलन;
सुधार laryngeal mucosa, यसको हटाउने edema;
सबैभन्दा टाढाको क्षेत्रमा एक चिकित्सकीय एजेन्ट प्राप्त सुनिश्चित - यो alveoli;
स्थानीय सुरक्षा कार्य बढ्छ।
यो कारणले गर्दा कार्यहरू जस्तै एक विस्तृत दायरामा, nebulizer (nebulizer) लडाई मा अपरिहार्य लगभग सबै श्वसन रोगहरु संग, यन्त्र धेरै राम्रो छ कार्यहरु सामना लागि हो कि स्पष्ट छ।
यसको प्रयोग नगर्न आवश्यक बेला यो उपकरण को सबै सकारात्मक सुविधाहरू तापनि त्यहाँ अमेरिका को एक नम्बर हो। यी समावेश: स्थिर उच्च रक्तचाप; श्वसन अपर्याप्तता; औषधि, inhalation लागि प्रयोग गरिन्छ जो एलर्जी; हाल myocardial infarction र स्ट्रोक; arrhythmia र हृदय अपर्याप्तता; माथि त्यसैले 37,5 ° सी को थर्मामीटर, एक सावधान पनि राम्रो निर्देशन तपाईँले किन्न अघि ध्यान दिएर पढ्नुहोस् र गर्नुपर्छ - आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न।
के उमेर मा एक व्यक्ति एक nebulizer प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
को inhaler (हामी सबै शायद प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि सम्झना हो कि एक) यो छोराछोरीको उपचार गर्न आउँदा, धेरै ध्यान दिएर प्रयोग गर्न भएको थियो। यो कारणले गर्दा पनि तातो बाफ र उपलब्ध उपकरण प्रयोग गर्न mucosa जलाए रही एक खतरा थियो भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ। सारा प्रक्रिया नवीनतम घटनाहरु को आगमन संग बिल्कुल सुरक्षित भएको छ। वर्तमान मोडेलहरू crumbs बेचैनी छुटकारा र रोग छिटो सामना गर्न मदत छैन। यस्तो उपकरणहरू प्रयोग सबै निर्माताको सिफारिसहरू र आफ्नो बाल विशेषज्ञ निम्न, जन्म देखि हुन सक्छ।
मिति, त्यहाँ यस यन्त्रको4प्रकारका छन्। जो एक किनभने प्रत्येक केही फाइदा र केही बेफाइदा छ, सबै भन्दा राम्रो छ भन्न गाह्रो। एक "उपचारात्मक बादल" मा ताप द्वारा स्टीम परिवर्तन मोडेल दबाइ समाधान छ। प्रक्रिया sputum को nasopharynx र राम्रो अलग mitigate गर्न मद्दत गर्छ। समाधान मा दवादारू एउटा सानो एकाग्रता; यो उपकरण आफ्नो कमियां छ केही उपयोगी गुणहरू को हानि (त्यसैले अक्सर कम कम तापमान मा जोश कि अस्थिर तेल प्रयोग); तातो बाफ को inhalation द्वारा केहि परेशानी। वास्तवमा, यस्तो उपकरणहरू कम, लोकप्रिय असमर्थ नवीनतम मोडेल संग प्रतिस्पर्धा गर्न भएका छन्।
Nebulizer Inhaler-खुम्च्याउने निम्नानुसार संचालित: को खुम्च्याउने को सञ्चालन कारण उत्पादन जो संकुचित हावा, को प्रभाव अन्तर्गत दबाइ तरल एक aerosol मा परिवर्तित छ। यस प्रकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा धेरै चिकित्सकीय समाधान स्प्रे आफ्नो क्षमता छ। कमीकमजोरी बीच एक ठूलो आकार र ठूलो सोरले, सञ्चालन समयमा उत्पन्न भएको छ, जो भनिन्छ गर्न सकिन्छ।
अर्को समकालीन उपकरण एक inhaler (nebulizer) अल्ट्रासाउंड छ। यो aerosol गठन कारण धातु प्लेट भएको प्रभाव को कम्पन गर्न हुन्छ ध्वनि छालहरू। फलस्वरूप, धेरै राम्रो कणहरु, को alveoli गर्न पनि भित्र पस्नु गर्न सक्षम उत्पादित गर्दै छन्। सानो आकार यो यात्रा र यात्रा को लागि आदर्श बनाउँछ। अर्को प्लस - एक कम हल्ला स्तर। उनि पनि एक सुत्ने बच्चा को उपचार को लागि, विशेष चुच्चो गर्न प्रयोग गर्न किनभने, सक्नुहुन्छ धन्यवाद यस्तो उपकरणहरू साना बच्चाहरु परिवारको लागि आकर्षक छन्। साथै, यदि चाहेको, moisturize गर्न सक्नुहुन्छ र कोठा, मा हावा कीटाणुरहित जो सजिला हुँदा घर संक्रमण "hotbed"। तर त्यहाँ एउटा "तर" छ। सबै औषधिहरू किनभने sonicate गुण यो उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ छैन।
यो लगभग आदर्श जाल nebulization छ। तिनीहरूले माथिको मोडेल को सबै लाभ सञ्चालन बिल्कुल कुनै हल्ला सिर्जना गर्दैन समयमा संयुक्त; तपाईं चिकित्सा समाधान को एक विस्तृत श्रृंखला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ; सानो आयाम घर बाहिर प्रयोग गर्न धेरै सजिलो एकाइ बनाउन; उपकरणहरू एक उच्च वेग aerosol स्प्रे छ भन्नुभयो।
जो nebuliser आफ्नै प्रत्येक निर्णय गर्न, व्यक्तिगत प्रयोगको लागि खरिद गर्न। आधारभूत लाभ र मोडेल को बेफाइदा सिक्न, तपाईं सुरक्षित खरिदका लागि जान सक्नुहुन्छ।
राम्रो डाक्टर कहाँ फेला पार्न?
को छाती मा रातो स्थलहरू: कारणहरू र उपचार
रोगी अनुरोध गर्न जवाफ, "कसरी र कहाँ प्राथमिक मूत्र गठन गरिएको छ, व्याख्या"
Neurula - भ्रूण विकास एक चरण
अचम्मको ग्रीस। रोड्स। बराबर कुनै छ जो आकर्षण,
होटल Delfin3* (सनी बीच, बुल्गेरिया) तस्बिर, समीक्षा
अफ्रिकी सुँगुर ज्वरो: लक्षण, निदान, नियन्त्रण विधिहरू
कसरी प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न "Adob फ्ल्यास प्लेयर"?
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण: GOST। विद्युत आयत विरुद्ध व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण - यो छ ...
क्षेत्र क्यानाडा। क्यानाडा को क्षेत्र। क्यानाडा सीमाना
AVCHD - ढाँचा कस्तो? विकसित भिडियोकोडेक उच्च परिभाषा - विकसित भिडियोकोडेक उच्च परिभाषा
UDS GAME: प्रयोगकर्ता समीक्षाहरू
कसरी हुन र तपाईं उनको हात भङ्ग भने के के?
को घन्टी को सिक्का कसरी बनाउने। आफ्नै हातमा सिक्का को घन्टी
चरण निर्देशनहरूको द्वारा व्यावहारिक सल्लाह र चरण: Windows 10 अद्यावधिक कसरी असक्षम
मानव शरीर मा आयोडिन। जो उत्पादनहरु आयोडिन छ?